♪ Angel Shaper: August 2009
အားလုံးသော မောင်နှမများကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။
ဒီကနေ့အိမ်သစ်တက်ပွဲလေး ဖြစ်မြောက်လာဖို့အင်မတန်ကြိုးစားခဲ့ရတာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်လောက်ကပေါ့ အလုပ်ကအပြန် လူကလဲ ပင်ပန်းပြီး ဖျားနေသလို ဖြစ်တာနဲ့ပဲ ဆေးသောက်ပြီး မအိပ်ခင် ကွန်ပျူတာဖွင့် ဘလော့လေးဝင်ကြည့်လိုက်တော့ နာဂစ်ထက်ဆိုးတဲ့ မုန်တိုင်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ Upgrade to pro today! ဆိုတဲ့စာလေး တစ်အိမ်လုံးမှာ ပျံနှံ့ နေပါတယ်။ ဘာကြီးမှန်းလည်းမသိတာနဲ့ ခေါင်းကြီး သွားတယ်လေ။ ဘာမှမလုပ်တတ်လောက်အောင် တော်တဲ့သူဆိုတော့ ဂျီတော့လေးဖွင့်ပြီး တွေ့တဲ့ သူကို အကူအညီတောင်းဖို့ လုပ်ရပါတယ်။
သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ..... အားလုံးလိုလိုက ဂျီပုန်းလုပ်ပြီး ပွေလီနေတာလား၊ အိပ်နေကြပြီလား မသိပါဘူး။ တစ်ယောက်မှ မတွေ့။ ကံကောင်းထောက်မစွာ စံပီးဆိုတဲ့ မောင်ငယ်ဘလော့ဂါလေးနဲ့ တွေ့ ပါတယ်။ သေချာ ဝင်မွှေထားပေးဖို့ အကူအညီတောင်းပြီး ဆေးရှိန်နဲ့ အရမ်းအိပ်ချင်နေလို့ အိပ်ယာဝင်ခဲ့တယ်။ မနက်နိုးလာတော့ ဘလော့လေးပဲ အရင်ဆုံးဝင်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရှင်လေးက ပြီးအောင်လဲ လုပ်မထားဘူးလေ။ အိမ်လေးက သပ်ရပ်နေပေမယ့် Angel Shaper သိပ်ချစ်တဲ့ မောင်နှမတွေ ပေးခဲ့တဲ့ ကော်မန့်လေးတွေနဲ့ လင်ခ့်လေးတွေ မတွေ့ရတော့ ပြာယာခတ်သွားပါတယ်။ အဲဒီနေ့ တစ်နေကုန် ဘာမှ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ရင်ထဲမှာ ဝမ်းနည်းပြီး ငိုတောင်ငိုမိ မတတ်ပါပဲ။ အဲလို ဘာဆက်လုပ်ရမယ်မှန်းလဲ မသိလောက်အောင် တော်တာပါ။ ဟီးးး
မောင်မင်းကြီးသားကလဲ အွန်လိုင်း နှစ်ရက် ဆက်တိုက် တက်မလာပါဘူး။ ငါတော့ ပညာပြခံလိုက်ရတယ် ဆိုပြီး တငိုငိုနဲ့ အွန်လိုင်းမှာတွေ့သမျှ အကို၊အမတွေ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကို တိုင်တန်းပါတယ်။ သမီးကို တတ်နိုင် သလောက် ဖျောင်းဖျနှစ်သိမ့်ကြပေးပါတယ်။ ကျေးဇူး သိပ်တင်ပါတယ်လေ။ သမီးအကို ကိုနိုင်ကြီး၊ အကျီ င်္ အဖြူလေးနဲ့ ချစ်မမထင်းထင်းမေလေး၊ သူငယ်ချင်း ရေတမာ၊ ဘုမသိဘမသိ လိုက်ချော့ပေးနေရတဲ့ သူငယ်ချင်း စုလတ်။ သူတို့လေးတွေက အကြံအဥာဏ်ပေး၊ နှစ်သိမ့်အားပေးခဲ့ကြတာ အဲဒီအချိန် Angel Shaper ခံစားနေရ တာတွေအတွက် အားဆေးလေးတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတာ အမှန်ပါ။ နောက်ရက် ဟိုတစ်ယောက် အွန်လိုင်းတက် မတက် စောင့်နေပါသေးတယ်။ နေ့လည် အလုပ်သွားခါနီးမှ ရောက်လာတော့ ငိုပြ၊ ချွဲပြပြီး သူ့ကို ဆူလိုက်ပါသေးတယ်။
(အဟီး ချစ်စရာလေးနော်အကူအညီလဲတောင်းသေးတယ်။ ဟဟားး) သူက ရှင်းပြ၊ ပြောပြပါတယ်။ အမအတွက် လုပ်ပေး နေတာပါတဲ့။ သူကလဲ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ပေးနေပါတယ်တဲ့ ။ အဲလိုဆိုတော့လည်း အိုကေပေါ့။
ဒီလိုနဲ့နောက်ရက် အွန်လိုင်းမှာ ဘလော့လေးစဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ (မိန်းမကြောက် အဲ ချစ်တဲ့) သူငယ်ချင်းဟိန်းနီ ထူးဆန်းစွာ အွန်လိုင်းမှာပေါ်လာပါတယ်။ ဘယ်ရမလဲ အိမ်သစ်လေးကြွားပြီး လိုအပ်တာတွေ ထပ်လုပ်ပေးဖို့ ဝကွက်အပ်လိုက်ပါတယ်။ ဟဟားးး (မျက်နှာမြင်ခိုင်းချင်ပါစေ ဆိုတဲ့ ဆုများ ပြည့်ခဲ့လေရော့သလား ဟိန်းနီရေ)
သူတို့ ရဲ့ စေတနာနဲ့ အလှဆင် ပြင်ဆင်ပေးမှုကြောင့် ဖြူစင်ကြယ်လေးဟာ ခုတော့ ကြည့်ပျော်ရှုပျော်လေး ဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့ကို ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့စကားထက် ပိုလေးနက်တဲ့ စကားလေးတွေ ရှိရင်ထပ်ပြောချင် ပါသေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စေတနာလေးတွေကြောင့် အိမ်သစ်လေးနဲ့ပေါ့။
အိမ်သစ်တက်ပွဲလေးကို အစားသောက်လေးနဲ့ပါ လုပ်ချင်လာတာနဲ့ နေကောင်းခါစ မမမေမေဂျာမုန်းကို ပူဆာ လိုက်ပါတယ်။ သူကလဲ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ပဲ ချက်ပြုတ်ပြီး ချက်ချင်းပို့ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပညာရှင်လေးတွေရဲ့ နှောင့်နှေးမှုတွေကြောင့် (အဲလို အပြစ်တင်မိတာ ကိုယ်ပျင်းမှန်းမသိစေချင်တာ ဖြစ်မယ် ဟိဟိ) မမမေမေ လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ အစားအသောက်လေးတွေ ချက်ချင်းချမကျွေးနိုင်တာ တောင်းပန်ပါတယ်နော်။ ဒါပေမဲ့ မပူ ကြပါနဲ့ ၊ မပူကြပါနဲ့နော်... ရေခဲသေတ္တာထဲ သိမ်းထားပါတယ်။ မပုပ်မသိုးပါဘူး။ ဟိဟိ လတ်ဆတ်မွှေးကြိုင်ပြီး စားချင်စဖွယ်ပါပဲနော်။ မြူးလေး ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတော့ ခရီးပန်းလို့ဘာမှ ချက်မပေးနိုင်ရှာတော့ ချစ်တဲ့ ရေခဲမုန့် တွေနဲ့ မမမေမေချက်ပေးထားတဲ့ အစားအသောက်လေးတွေနဲ့ပဲ ချစ်တဲ့မောင်နှမတွေကို ဧည့်ခံလိုက်ရ ပါတယ်။
သူငယ်ချင်း ရေတမာကလည်း သူကိုယ်တိုင်ကြော်ထားတဲ့ အကြော်တွေဆိုပြီး ဗန်းလိုက် ယူလာပါတယ်။ ပျော်စရာကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် အချဉ်ရည်လေးတွေတော့ အဲကောင် နမော်နမဲ့ လုပ်လိုက်လို့ မှောက်ကုန်သတဲ့။ ခေါင်းတစ်ချက် ခေါက်လိုက်ရပါတယ်။ တိန်။ ဟိဟိ အရသာရှိလေစွ။။။။။။။။။။။။။။။။ ဗိုက်ဝအောင်စားသွားကြပါ။ ကျွတ်ကျွတ်အိတ် ထုတ်လာတဲ့ ချစ်ကို ကိုသားကြီးကတော့ အဝစားပြီး ကျန်တာ ထုတ်သွားပေါ့။ (ဟိဟိ ကျန်တာပဲနော်)။ အဆိုအတီးကိုကျတော့ ကိုယ်တိုင် ဟော်လိုလေးနဲ့ ဆိုပြီး ခြင်ထောင်ချသွင်းကြည့်မလို့ပါပဲ။ ဒီမောင်နှမတွေ သေခန်းရှင်ခန်းပြတ် ဖြစ်သွားမှာ စိုးလို့လက်လျော့ လိုက်ရပါတယ်။ Angel Shaper မှ အားလုံးကို သံယောဇဉ် မပြတ်နိုင်တာ။ ဟဲဟဲ ဒါကြောင့် ဘလော့လေးနဲ့ လိုက်မယ့် ကိုနွေဆူးပို့ပေးထားသော အကြည်တော်ရဲ့ ဖြူစင်ခြင်းဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ အားလုံးကို ဧည့်ခံလိုက်ရပါတယ်။ Angel Shaper ကိုယ်တိုင် ဆိုပြီး သွင်းမဲ့ သီချင်းလေးကတော့ ကိုနွေဆူးရေးထားတဲ့ ချိုးငှက်လေး ဆိုတဲ့ သီချင်းပါ။ ကိုသားကြီးကလည်း ရေးပေးနေပါတယ်တဲ့။ မပို့သေးလို့မရသေးပါဘူး။ ဒါတွေက အဆိုတော် ဖြစ်ချင်တဲ့ Angel Shaper ရဲ့ ရူးသွပ်မှု တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်လေ။ အခွင့်ရရင်တော့ သတ္တိရှိတဲ့သူ နားထောင်လို့ရအောင် ကြိုးစားပြီး တင်ချင်ပါတယ်။ ဟဲဟဲ....................
ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်ကြီး ဖြစ်လာတဲ့ တစ်နေ့Show တွေ Concert တွေ အတွက် VIP တန်း လက်မှတ်လေး တွေကိုလည်း ကြိုတင်ပြီး ဘွတ်ကင် လုပ်ထားချင်ရင်ရပါတယ်နော်။ Angel Shaper ရဲ့ ဘလော့ဂါမောင်နှမများ ကတော့ ဦးစားပေး VVIP တန်းကိုပေးမှာပါ။ ဟဲဟဲ။။။။ ကဲကဲကဲ......... ကြွရောက်လာတဲ့ မောင်နှမများအားလုံး အကြည်တော်ရဲ့ ဖြူစင်ခြင်းကို နားထောင်ရင်း မုန့်လေးတွေ အားရပါးရ စားပြီး ပျော်ကြတာပေါ့နော့်။
စားသောက်ခြင်းအစီအစဉ် စတင်လိုက်ပါပြီ။ ဖြောင်းးးးးးးး ဖြောင်းးးးးးးးးးးး ဖြောင်းးးးးးးးး
ကိုသားကြီး လက်ခုတ်သံ အကျယ်ဆုံးးး ဟဟဟဟားးးးးးး
ဒါတွေကတော့ မမမေမေရဲ့ လက်ရာလေးတွေပါ။
မမမေမေ ကိုယ်တိုင်ရှယ်ချက်ပေးထားတဲ့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲလေးပေါ့။
အိုးလိုက်ကို ချပေးတာနော်။ အစားကြီးတဲ့ သူ ကြိုက်သလောက်သာ တွယ်ကြမယ်ဗျိုးးးးးးးး
ဒါကတော့ ငှက်ပျောသီးဆနွင်းမကင်းတဲ့။ အချိုပွဲ အတွက်ပေါ့။
ဒါကတော့ သူငယ်ချင်းလေး ရေတမာရဲ့ အကြော်စုံပါ။
ခုတော့ သမီးရဲ့ ကိုယ်ပိုင် မုန့် လေးတွေ ချကျွေးမယ်လေ။
ခုရေခဲမုန့် အလှည့် ဟီးးဟီးးးး ပလွတ်။။။
သမီးရဲ့ မောင်နှမများအားလုံးကို သတိရနေပါသည်။
အားလုံး ကျန်းခန့်သာလို့ မာနေကြမယ်လို့ ယုံကြည်ယူဆကာ ဆန္ဒလေးလည်းပြုလိုက်ပါသည်။
သမီးလည်း သာလို့ မာလို့ ပါပဲ။ ဟီးးးဟီးးး
အိမ်လည်မထွက်နိုင် အသစ်မတင်နိုင် ခြင်းကို နားလည်ပေးစေချင်သည်။
အိမ်သစ်လေး ဆောက်နေ၍ ဘာမှ မလုပ်နိုင်၊ ဘယ်မှ မသွားနိုင်သေးပါ။
အိမ်သစ်လေး ပြီးမှ မောင်နှမများ နဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အိမ်သစ်တက်ပွဲ လုပ်နိုင်ရန် အားခဲထားသည်။
အခုတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ လယ်စိုက်ပြီး ပိုက်ဆံစုနေသည်။ ဟိဟိ
အစားအသောက်၊ အဆိုအတီး ပါနိုင်အောင်လဲ ကြိုးစားနေသည်။
အစားသောက်အတွက် သမီးရဲ့ မမမေမေ နဲ့ ညီမလေးမြူးကို အပူကပ်ထားသည်။
မမမေမေကတော့ ချက်ပေးပြီးပြီ။ စားချင်စဖွယ်လေးတွေမို့ လို့အရင်ကစ်ရမလား စဉ်းစားနေသည်။
ဟိဟိ (ကိုသားကြီး ဒေါပွဦးမယ်)
ဟိုကောင်မလေး ကတော့ ခုထိ သတင်းလာမပို့ သေးပါ။
အားလုံးကို သတိရတယ်။ လွမ်းတယ်။ လင်ခ့်တွေလဲ မနည်းပြန်စုနေရတယ်။
လာချောင်းကြတာ ကျေးဇူးတင်တယ်။ ဟိဟိ
အားလုံးနဲ့ ပျော်ရွှင်ဖို့ အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ ပန်းကန်လုံးစီး နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းနေသည်။
24. 8. 09 ( Mon; )
နင်နဲ့ ငါဟာ တားမြစ်ချက်များစွာနဲ့ ဆုံခွင့်ရထားသူတွေပါ။
တစ်ချိန်တုန်းက နင်ငါ့ကို အရမ်းချစ်ခဲ့ပြီး၊ ငါလဲ နင့်ကို သိပ်ချစ်ခဲ့တာတွေဟာ
ခုတော့ ပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ်လိုပါပဲလား။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီပုံပြင်လေးကို ငါခုချိန်ထိ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောပြနေမိတယ်။
တကယ်တော့ ငါတို့ နှစ်ယောက်ဟာ ကမောက်ကမ လောကကြီးရဲ့ ချောက်ချတာကို ခံနေရတယ်။
နင့်ကို ငါချစ်သလို၊ ငါ့ကိုနင်သိပ်ချစ်ခဲ့တဲ့ ငါတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်တွေဟာ
လူတွေအမြင်မှာ နားလည်ရခက်သလောက် ငါတို့ နှစ်ယောက်အတွက်
ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ ပုစ္ဆာတပုဒ် အဖြေကို ညှိယူသလိုလေးပါပဲနော်။
ဒါပေမယ့် ငါ့ကို တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ပြီး နင်ဟိုးးးးးးးးးးးးးးးးအဝေးကြီးကို ထွက်သွားလိုက်တာ.....
ငါလုံးဝ မသိတဲ့ အဝေးတစ်နေရာမှ တကယ့်ကို အဝေးကြီးနော်။
ဘယ်ဆီမှာမှန်းကို မသိတဲ့ အဝေးကြီးကို နင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။
နင် နှုတ်ဆက်မသွားခဲ့သလို ပြန်လာမဲ့နေ့ ကိုလဲ မပြောခဲ့တဲ့
နင့်ရဲ့ ဂတိတွေ၊ သစ္စာတွေအတွက် ငါ နင့်ကို စောင့်နေပေးရဦးမှာလား။။။။
နင့်အတွက် ဆိုပြီး ငါ့အလွမ်းတွေ တနင့်တပိုး ထုပ်ပိုးထားခဲ့တာ ပုပ်သိုးသွားခဲ့ပြီ။
ငါ နင့်ကိုမချစ်ခဲ့ဘူး။ ငါနင့်ကို မလွမ်းခဲ့ဘူး။ ငါနင့်ကို မတမ်းတခဲ့မိပါဘူးဟာ။။
18.8.09 ( Tue; )
4: 25 Am
အားလုံးသိဖူးပြီးသား၊ နားလည်ပြီးသားဖြစ်မဲ့ ပုံပြင်တိုတိုလေး တစ်ပုဒ် မျှဝေလိုက်ချင်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက် သူ့ကလေးကို ပုခက်လေးမှာ သိပ်ရင်းနဲ့ ထမင်းစားနေသတဲ့။
သူ့ကလေးကလဲ တော်တော်နဲ့ အိပ်မရတော့ ဂျီကျတာပေါ့....
"အဖေ... အဖေ... သားကို လွှဲပေး.... သားကိုလွှဲပေး" ဆိုပြီး အော်ငိုတော့တာပေါ့။
သူ့ အဖေက "သားရေ... မလွှဲပေးနိုင်သေးဘူးဟေ့........
အဖေ စားလို့ မဝသေးဘူးကွ" လို့ ပြန်ဖြေလိုက်သတဲ့။
15.8.09 ( Sat; )
ခုတလော အိမ်တိုင်းလိုလိုမှာ တွေ့နေရတဲ့ ခုတလော ဆိုတဲ့ တက်ဂ်လေးကို ငှက်ကလေးဆီ သွားဖတ်တော့ သူက လူလည်ကျပြီး အားလုံးကို သိမ်းကျုံး တက်ဂ်ထားတာတွေ့ရတယ်။ ဘယ်ရမလဲ.. အရူးကွက်နင်းပြီး မသိချင် ယောင်ဆောင်နေလိုက်တာပေါ့။ ဟိဟိ...ဒါပေမယ့် အဲဒီ ငှက်စုတ်လေးက မရဘူး။ အိမ်ထိလာအော်သွားတယ်။
မမရေ... တက်ဂ်ထားတယ်နော်...ဆိုလို့ အရင်တက်ဂ်လိုပဲ နေလိုက်ရမလားပေါ့။ အဟဲ.....လုပ်တော့ပါဘူးနော်။
ငဇော့်အိမ်ရောက်ပြန်တော့ နာမည်စာရင်း၊ ဘလော့စာရင်းနဲ့တကွချစ်ပြထားတာတွေ့လိုက်ရပြန်ကော။။။။
ဟိုရွေ့ဒီရွေ့ လုပ်ကြည့်မိသေးတယ်။ မနေ့က ကိုကြီးသစ် (သီဟသစ်) ကလဲ မလှမ်းမကမ်း လာအော်ထားတာ တွေ့တော့ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ.......
ကျွန်ုပ်လဲ လောကီသားပေမို့ချစ်ခင်၍ တက်ဂ်ခြင်းကို ဝမ်းသာအားရပဲ ချရေးလိုက်မိပါတော့သည်။ ပေါ့.......
တို့ခုတလော
တာရာမင်းဝေရဲ့ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ထဲက ကောင်လေးတစ်ယောက်လို လိုက်တွေးကြည့်နေမိတယ်။
အော်.... တို့တစ်တွေ ခုခေတ်မှာ လူဖြစ်လာရတာ ကံကောင်းလိုက်တာနော်။
ကမ္ဘာဦးမှာသာ လူဖြစ်ရရင်တော့.... အဝတ်တွေလဲ မပါဘူး။။။
ရှက်စရာကြီးးးး အဟိ.............လို့အူကြောင်ကြောင်တွေးနေမိတယ်။
အော်.... What I Know Is I Know Nothing!!! ပါလားနော်။
ခေါင်းက ဒေါင်ခနဲ ဒေါင်ခနဲ ထထမြည်တယ်လေ။
မျက်ကြောတွေလဲ တင်းလို့ ။
အရိုးအဆစ်တွေလဲ တစ်ကျွတ်ကျွတ် ထထ မြည်တယ်။
အဲလောက် ကျန်းမာရေး ဒေါင်ဒေါင်မြည်၏ ပြောပါတယ်။
လက်လှမ်းမီသလောက်ပါပဲ။ (လှမ်းမမီရင် မဖတ်ဖြစ်တော့ဘူးလေ)
ဟိုဟို ဒီဒီ။ ရောက်တတ်ရာရာ။။။။
ဟိုရေး၊ ဒီရေး၊ ရေးချင်ရာလျှောက်ရေး နေမိတယ်။
Jango က လာတဲ့သီချင်းတွေ၊ မောင်နှမတွေရဲ့ ဘလော့အိမ်ကသီချင်းတွေ၊ ဖုန်းထဲက သီချင်းတွေ၊ အစုံပါပဲ။
ကာတွန်းထဲက ကိုပူစီလေး ဖြစ်ချင်မိတယ်။ အမြင်မတော်တာလေးတွေ လိုက်လုပ်ပေးနိုင်အောင်လို့ ။
လူနဲ့ တည့်တဲ့အစာ၊ စားလို့ ရတာမှန်သမျှ စားဖြစ်နေတယ်။
ဟိဟိ။။။ အစားဆိုရင် ကြိုက်တာလာ။။။။။
စိတ်ကောက်ရင် ရေခဲမုန့် ကျွေးပြီး ချော့တတ်တဲ့သူ့ ကို။
တို့ ကမေ့တတ်တယ်နော် အချစ်......
စဉ်းစားနေတာ........ စဉ်းစားနေတာ... ဘာတွေ မေ့နေတာလဲလို့ ...
အဲ ပြောမလို့ ဟာ မေ့ပြီ။
ရင်ထဲကမပါတဲ့ အပြုံးတုတွေ၊ စကားလုံး အနုအရွတွေ (အသည်းယားလို့ ...)
မနက်တိုင်း အဘိုးဝယ်ကျွေးတဲ့ ကြက်သားပူတီ နဲ့ အီကြာကွေး။
လိမ္မာတိုင်း အဖေဝယ်တိုက်တဲ့ ဒိန်ချဉ်တစ်ခွက်။
ဦးလေး လုပ်ကျွေးတဲ့ ခေါက်ဆွဲပြုတ်။
မောင်လေးအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ သားငယ်လေး ခပ်တိုက်တဲ့ ရေတစ်ခွက်။
အိုးးးးးးးးး မယ်မင်းကြီးမ... တမ်းတတာတွေကလဲ အစားအသောက်တွေကြီးပဲလား... ဟရို့ ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သာ ကိုးကွယ်နေသူတွေ။ ( ငါ.. ငါ... ငါ... ဆိုသူတွေပေါ့ )
မေတ္တာတရား နဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်း မရှိတဲ့နေရာ။
အများကြီးပဲ.... စားမယ်။ အိပ်မယ်။ ဘလော့လည်ဖတ်မယ်။ သီချင်းနားထောင်မယ်။
မျက်နှာဖုံးစွပ် ဟန်ဆောင်တတ်တဲ့သူတွေ။ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်း လုပ်ရဲတဲ့ သူရဲဘောကြောင်တွေ။
ဥပမာ.....၅နာရီခွဲနော်ဆိုပြီး ၈နာရီခွဲမှ ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုစောင့်ဆိုင်းရတာမျိုးပေါ့။
ဘတ်စ်ကားစောင့်ရတာ။ ကားလမ်းပိတ်လို့ စောင့်ဆိုင်းရတာမျိုး။
သူ့ အသံ။ အဟိ
မေတ္တာ၊ အကြင်နာ၊ နွေးထွေးတဲ့ ဂရုစိုက်မှု ( လောဘကြီးတယ်နော် )
လူသားအားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေ။ (တကယ်တောင်းဖြစ်တယ်နော်။ မယုံမရှိနဲ့ )
ပျော်ပျော်နေ သေခဲ၊ မော်တော်တွေ ရေထဲ။။။။။
သူလေ တော်တော်ကဲ။ ဟဲဟဲ
ခုတလော ပြုံးပျော်ကြည်နူး နိုင်ကြပါစေလို့ လဲအမှာစကားပါးခဲ့ချင်ပါတယ်။။။။။။။
ကိုယ်တကယ် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူစွာနဲ့ဒီတက်ဂ်လေးကိုရေးလိုက်တာပါနော်။
ငှက်ကလေး၊ ငဇော်၊ ကိုကြီးသစ် ကျေနပ်နိုင်ပါစေလို့ ။။။။။
12.8.09 ( Wed; )
သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးအတွက် အမှတ်တရ တစ်ခုခု တော့ရေးချင်တယ်။
Angel Shaper ကိုချစ်ပြီး Angel Shaper ကချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အကြောင်းရေးရမယ်ဆိုရင်တော့
စာမျက်နှာကလဲ လုံးဝ လုံလောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် အထူးတထွေ ရေးမနေတော့ပဲ... ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများ၊
အတူတွေ့ဆုံပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းများ၊ မတွေ့ဖူး၊ မမြင်ဖူးသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ၊
ဘလော့အိမ်သားများအားလုံး အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကဗျာစာတိုလေးတွေနဲ့ပဲ
ပြောချင်နေတဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက စကားလုံးတွေကို သွန်ချလိုက်တော့မယ်နော်။
အရမ်းတော်လို့ မဟုတ်ပါဘူး ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးတာလေးတွေထဲကပါပဲ။ ရင်ဘတ်ထဲက လာတာလေးတွေမို့လို့ ရင်ဘတ်လေးတွေနဲ့ပဲ ခံစားပေးပေါ့။
Happy Friendship Days To All My Buddies!!!!
It's for you all......
I Can Say, You Are One Of The Finest People I Have Met.
I Can Say, Time Spent With You Is Full Of Fun.
I Can Say, My Success Makes You Smile.
I Can Say, You Hate My Troubles More Than I Do.
I Can Say, You Are An Amazingly Great Friend.
But, I Won't Say All This.......
So All I Will Say Is..........
LETS BE FRIENDS FOREVER AND ALWAYS!
ဒီအောက်က FRIENDSHIP IS LIKES ဆိုတာလေးကတော့ ၂.၈.၂၀၀၃ ခုနှစ် က အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပို့ထားတဲ့ မက်ဆေ့လေးပါ။
အရမ်းမှန်ကန်လေးနက်ပြီး သဘောကျနှစ်ခြိုက်မိလို့ ခုထိမှတ်မိနေတာပေါ့။
FRIENDSHIP IS LIKES
Friendship Is Like The Relationship Between
The Hand And The Eyes.
It's Like When The Hand Gets Hurt, The Eye Cries And
When The Eye Cries The Hand Wipes Its Tears.
So, Keep The Lamp Of Friendship,
Because, Sun Rises In East And
But, Friends Rise In Heart And
Sets After Death.....
ချစ်ခင်မှုလေးတွေ မြဲမြံစွာနဲ့ ပျော်ရွှင်ဆက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့
2.8.09 ( Sun; )